Ngenisa isikolo, iqumrhu, okanye igama lenethiwekhi
Jonga ukuthelekisa 0
Ukulungela ikholeji nokulungela umsebenzi
Yongeza ukuthelekisa Added! Susa ku Thelekisa
Amanyathelo okuthatha isidanga ukuba ngaba abafundi bazigqibe ngempumelelo zonke iimfuno zokuqhubela phambili kwisikolo samabanga aphakamileyo. Ukuthweswa isidanga kukwabandakanya isibonakaliso samandla ediploma emalunga nokuba abafundi baphumelele na kwiimfuno zediploma yaseIndiana abangama-40 okanye ngaphezulu kwaye abafumananga mvume yovavanyo. Abafundi bebekwiqela eligqityiweyo elisandul &#39;ukugqitywa ababhalise esikolweni bayabandakanywa xa benika ingxelo yolwazelelo. (Umthombo wedatha: 2018-2019 cohort)
Ngawaphi amaxabiso okuphumelela kwesi sikolo?
Amanyathelo okuthatha isidanga ukuba ngaba abafundi bazigqibe ngempumelelo zonke iimfuno zokuqhubela phambili kwisikolo samabanga aphakamileyo. Amanyathelo amandla ezediploma ukuba ngaba abafundi bazigqibile iimfuno zesibalo sediploma saseIndiana ezingama-40 okanye ngaphezulu, kwaye abafumananga mvume yokuphuma kuzo naziphi na iimfuno zokupasa.
Abafundi bathweswe izidanga ngaphakathi kwiminyaka emi-4
I-avareji kaRhulumente 86.4%
Ubuhlanga / ubuhlanga
Mnyama / umAfrika-waseMelika
I-Hawaiian okanye i-Pacific Islander
Izikolo ezinje ngesi sikolo ziyafana ngokwemigaqo yendawo yokuhlala engundoqo.
I-avareji kaRhulumente 70.8%
Benza njani abafundi kwesi sikolo ngokuthelekiswa neethagethi zikarhulumente zangoku kwiNqanaba lesiGaba esiSibhozo kunye nokuQhubeka kweDiploma?
Ujoliso lwethutyana lubonakalisa inkqubela phambili elindelekileyo ekufezekisweni kweenjongo zokuphumelela kwabafundi zexesha elide.
Yeyiphi idiploma eyenzelwe abafundi abaphumelele kwesi sikolo?
Ulwazi malunga neemfuno zediploma yaseIndiana inokufumaneka kwi-https: //www.doe.in.gov/graduation-pathways
I-avareji kaRhulumente 9.7%
I-avareji kaRhulumente 50.5%
I-avareji kaRhulumente 39.8%
I-avareji kaRhulumente 12.1%
Lithini inqanaba labafundi kwesi sikolo abangafumananga idiploma kwisithuba seminyaka emine?
La macandelo amele abafundi abasesekolweni, kodwa abangakhange bahlangabezane neemfuno zokuthweswa isidanga ngaphambi kukaSeptemba 30 wonyaka wokuphumelela komfundi weqela.
Isatifikethi sokugqitywa kwekhosi
I-avareji kaRhulumente 0.1%
Isatifikethi semfundo ekhethekileyo
I-avareji kaRhulumente 1.2%
Ukulingana kwiSikolo samabanga aphakamileyo
I-avareji kaRhulumente 0.2%
I-avareji kaRhulumente 5.2%
I-avareji kaRhulumente 5.9%
ISebe lezeMali laseIndiana
Fumana iingxelo zeZikolo kunye neZiko
Ixhaswa ngu Hoonuit